By U Win TinWednesday, September 9, 2009Much attention has been focused on Sen. James Webb's recent visit to my country and his meetings with Senior Gen. Than Shwe and incarcerated Nobel Peace Prize recipient Aung San Suu Kyi. I understand Webb's desire to seekameaningful dialogue with the Burmese ruling authorities. Unfortunately, his efforts have been damaging to our democracy movement and focus on the wrong issue -- the potential for an "election" that Webb wants us to consider participating in next year as part ofalong-term political strategy. But the showcase election planned by the military regime makesamockery of the freedom sought by our people and would make military dictatorship permanent.In our last free election, the Burmese people rejected military rule inalandslide, awarding our National League for Democracy party more than 80 percent of the seats in parliament. Yet the military has refused to allow the NLD to formagovernment. In the 19 years since that election, Burmese democracy activists have faced imprisonment, intimidation, torture and death as they have peacefully voiced demands for justice, individual and ethnic rights, andademocratic form of government that is representative of all Burma's people.While never ending our struggle for democracy, the NLD has continually sought to engage the regime and openadialogue -- based on peace and mutual respect -- that could address Burma's critical political as well as social problems. Make no mistake -- these two issues are linked. Burma was once the rice bowl of Asia. Today, because of the regime's destructive economic policies and its use of oppression to maintain military rule, Burma isashattered, poverty-stricken country.The regime is seeking to placeaveneer of legitimacy on itself through showcase "elections" and claiming that "disciplined democracy" will be instituted next year. Yet in May 2008, just days afteramassive cyclone devastated Burma and killed more than 100,000 people, the regime usedafarcical process to claim that 93 percent of voters chose to adoptaconstitution that permanently enshrines military rule and prevents those with undefined "foreign ties" from holding public office -- catch-all provisions that would bar Suu Kyi and democracy activists from seeking office.Some international observers view next year's planned elections as an opportunity. But under the circumstances imposed by the military's constitution, the election will beasham. We will not sacrifice the democratic principles for which many millions of Burmese have marched, been arrested, been tortured and died to participate inaprocess that holds no hope whatsoever for bringing freedom to our country.The demands of the NLD are reasonable. In April we issued another declaration to encourage engagement with the military that called for the release of all political prisoners,afull review of the constitution, reopening of all NLD offices and the right to freely organize. The regime's answer is the continued jailing of Suu Kyi and 2,000 other activists, massive military offensives against ethnic groups and the enforcement of rules to gag democracy.How can the international community playameaningful role? First, officials such as Webb should stop fear-mongering about China. His language about containing China, and working with Burma's regime to do so, is based on an outdated and unrealistic thesis. Suu Kyi rejected such notions by informing Webb that "we will not deal with anyone with fear and insecurity. We will deal with anyone, China, America, India, equally and friendly. As we can't choose our neighbors, we understand that we need to haveagood relationship with China." Second, the NLD encourages other countries and international organizations to engage with Burma's military leaders to persuade them to engage with us and Burma's ethnic groups. The United States and many other nations have imposed sanctions on Burma. That is their decision and in keeping with their justified solidarity with the democratic values that we all hold so dear. If the regime genuinely engages with the NLD and ethnic representatives, releases political prisoners, ceases attacks against ethnic minorities and takes additional steps to buildatrue democratic state, these sanctions will be repealed at the right time.In the meantime, let no one doubt our resolve. The NLD isareflection of Burmese society. We will not be cowed or coerced into participating inafatally flawed political process that robs the Burmese people of the freedom for which we struggle. We stand ready to engage, but we are more than willing to continue our struggle for the democratic values that so many have given their lives and their freedom to achieve.U Win Tin isamember of the Central Executive Committee andafounder of Burma's National League for Democracy party. He wasapolitical prisoner from 1989 to 2008. Summary only...
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပေါ်လစီ အမြန်ထုတ်ပြန်ဖို့ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ တောင်းဆို10 September 2009(VOA) မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်ရဲ့ မူဝါဒ ပြန်လည်သုံးသပ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး နယူးယောက် အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ (HRW) က အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန်ဆီကို စက်တင်ဘာ ၉ ရက်နေ့ နေ့စွဲနဲ့ စာတစ်စောင် ရေးသားပေးပို့ပြီး အခုလိုသာ ပြန်လည်သုံးသပ်နေတဲ့ကိစ္စဟာ နှောင့်နှေးနေရင် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရဲ့ ကတိက၀တ်တွေဟာ အားပျော့နေပြီလို့ မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေ အထင်ရောက်အောင် တွန်းပို့နေသလို ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ အဲဒီစာထဲမှာ ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် ပစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့တာ မဟုတ်ဘဲ အကျယ်အပြန့် အထွေထွေ အရေးယူ ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်အရေးယူတာက မထိရောက်ဘူးလို့လည်း HRW အဖွဲ့က ဆိုပါတယ်။ စစ်အစိုးရရဲ့ အဓိကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်သူတွေကို ရွေးချယ်ပစ်မှတ်ထားပြီး အရေးယူပိတ်ဆို့တာနဲ့ အထွေထွေအရေးယူ ပိတ်ဆို့တာကို လဲလှယ်အစားထိုးသင့်တယ်လို့ HRW အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံကို လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့ အကူအညီတွေ အကြီးအကျယ် ပေးဖို့ကိုလည်း HRW အဖွဲ့က ထပ်မံတောင်းဆိုထားပါတယ်။Letter to Secretary of State Hillary Clinton on the Current Burma Policy ReviewSeptember 9, 2009Related Materials: Burma: US Should Complete Policy ReviewSecretary of State Hillary ClintonUS Department of State2201 C Street NWWashington, DC 20520Re: Burma Policy ReviewDear Secretary Clinton:We write to you again about the human rights and political situation in Burma and the current US policy review. We believe it is important for the US government to conclude the policy review you announced in February so that American policy and strategy towards Burma will be clear to all concerned. We also believe that as intractable as the situation in Burma may seem, the United States does have options that could haveapositive impact on the human rights and political situation in Burma.As you know, Burma remains one of the most repressive countries in the world. There are strict limits on basic freedoms of expression, association, and assembly. The intelligence and security services are omnipresent. Censorship is draconian. More than 2,100 political prisoners suffer in Burma's squalid prisons. These prisoners include many members of the political opposition, courageous protestors who peacefully took to the streets in August and September 2007, and individuals who criticized the government for its poor response to Cyclone Nargis in May 2008. All have been sentenced after sham trials, summary hearings that often take place in the prisons themselves. The recent conviction of Aung San Suu Kyi on ridiculous charges reminded the world of the despotic nature of the military government that has been in power since 1962.At the same time, military abuses connected to armed conflicts in ethnic minority areas continue. Human Rights Watch has for many years documented the recruitment and deployment of child soldiers, the use of forced labor, and summary killings, rape, and other abuses against minority populations, including the Rohingya, Chin, Shan, and Karen. Recent attacks against Shan and Karen communities have once again led to large-scale displacement of ethnic communities and needless death and hardship. Fighting between the Burmese army and ethnic militias has also driven thousands of refugees from northern Shan state into China.In addition to rampant violations of civil and political rights, corruption and mismanagement have meant that under military rule Burma has become one of the poorest countries in Asia. The government seems to care little for the basic welfare of its people; to give but one example, while the Burmese government received an estimated US$150 million per month in gas export revenue in 2008, its last announced annual budget to address its AIDS crisis in 2007 wasamere $172,000. While most Burmese struggle to subsist, the country's leaders have the comfort of "5 star" lives of luxury generated through corruption from the plunder of the country's natural resources.There is no mystery in the military's long-term intentions, as the ruling junta, the State Peace and Development Council (SPDC), has been totally open about its plans to stage-manage an electoral process that will ensure continued military rule withacivilian face. Burma's generals have learned from their resounding defeat by Aung San Suu Kyi's National League for Democracy in 1990 and periodic protest movements that it cannot risk stagingacredible election (indeed, last year the government announceda98 percent turnout anda92 percent vote in favor ofanew constitution, just months after the 2007 street protests that rocked the country). They doubtlessly hope that this will mollify the United States, European governments, and other countries that oppose military rule, end the pressure from ASEAN states to make progress on political reform and national reconciliation, and encourage large-scale international aid flows.Based on the experience of the 2008 referendum, the harsh prison sentences handed down to activists, the lack of serious dialogue with the political opposition and Burma's many ethnic groups, the stonewalling of United Nations and ASEAN efforts to discuss political and human rights issues, the lack of any reform measures, and the trial of Aung San Suu Kyi on ridiculous charges, it is clear that there will be no meaningful change in the political direction of the country before or after the 2010 elections unless concerned governments and international bodies take steps to change the SPDC's calculations.We recognize the scale of this challenge. The military government has close relations with its neighbors China, India, and Thailand, and has large revenue streams from these countries from the sale of gas, timber, gems, and other natural resources. China, Russia, and even South Africa have protected the government from action at the United Nations Security Council. In short, while much of the world sees Burma's rulers as isolated, ruthless, and despised, from the SPDC's perspective it has influential friends in the region that provide massive resources through the purchase of energy and other commodities, and shield Burma from concerted action at the UN, ASEAN, and other international fora on subjects like effective arms embargoes or targeted sanctions.We largely agree with your statement that "the path we have taken in imposing sanctions hasn't influenced the Burmese junta," but that "reaching out and trying to engage them hasn't influenced them either." We suggest that the policy review should, therefore, aim at making more effective all three prongs of US policy - diplomacy, sanctions and humanitarian aid - and not placing one ahead of the others.DiplomacyOn diplomacy, asastarting point there should be no wishful thinking or illusions that more conciliatory talk from the US and others will somehow cause Burma's senior leadership to alter its plans. It is committed to remaining in complete control, whether through managed elections or the current system. Yet, as in other countries with which the Obama administration is now talking or attempting to open better lines of communication, Human Rights Watch supports US government efforts to speak to the Burmese government at the highest levels. While it is far from clear that the Burmese leadership has any interest in meaningful discussions with the US or any other critical actors, suchapolicy would remove the perception that the US and others are not willing to engage or be reasonable. Should the leadership be willing to have serious talks, there is nothing to be lost from talking so long as the US stands by its principles to uphold the basic human rights of the Burmese people.Butacouple of cautions: first, it is important that more intensive diplomacy does not lead into the trap of making improved relations the primary goal of US policy. The protection of the rights of Burmese andagenuine and credible political reform process needs to be the primary goal for US policy.Second, the US should keep in mind that the Burmese officials who normally speak to foreigners - whether the foreign minister or the functionaries involved in the post-Nargis reconstruction - have no real authority in the government and are probably as scared of Than Shwe and other senior leaders as anyone else. Many foreign diplomats and others who have investedagreat deal of time and energy in pursuing relations with the second tier of leadership have told us that it was time largely wasted. Those who do have the authority - Senior General Than Shwe, Vice-Senior General Maung Aye, Lt. General Thura Shwe Mann, Prime Minister Thein Sein, and key regional commanders - usually don't engage with outsiders. Talking to the deputy health minister and mid-level civil servants can be useful in facilitating humanitarian relief and resolving discrete practical problems on the ground. But it is notaway of addressing the fundamental issues in the country or causes of friction between Burma and the US.On key political matters, the engagement that has taken place thus far has not been very meaningful and in some cases has even been counterproductive. During the crackdown following the 2007 demonstrations, for instance, diplomatic action merely allowed the SPDC to buy time and pretend that it was engaged in serious discussions. For example, the efforts of the UN Secretary-General's special envoy, Ibrahim Gambari, have failed to achieve anything of substance. The situation has devolved to the point that at times gettingavisa orashort meeting with Aung San Suu Kyi was treated asasuccess, with the unintended but predictable consequence of being used by the SPDC for its own propaganda. Ban's most recent visit also failed to achieve anything of substance; he was not even allowed to meet Aung San Suu Kyi and was given empty promises to release political prisoners.Human Rights Watch recommends that the United States appoint its own special envoy, as called for in the Block Burmese JADE Act of 2008. That envoy should haveadirect line to the Secretary of State and specific instructions to engage inaprincipled way with the SPDC and other key bilateral and multilateral actors. Vigorous diplomacy is needed with China, India, Thailand, Japan, Indonesia, Malaysia and other influential actors to ensure that new revenue streams are not made available to the government.We also encourage you to consider the establishment ofaBurma Contact Group or some form of multilateral grouping to meet and regularly discuss diplomatic engagement with the Burmese government onarange of issues. This could have the effect of converging the views and policies of China, India, Thailand, Indonesia, Japan, the EU and UN, and gradually minimize the ability of the SPDC to play states off against each other. There is considerable common ground onarange of issues, including the need for political reform and credible elections involving the political opposition, concern over Burma's trafficking in heroin and methamphetamines, and the need foraregional approach to the HIV/AIDS epidemic. Suchagrouping would, of course, have to be predicated on the US sticking to its principles and not engaging in diplomatic horse-trading on core issues of reform.As the United Nations has long been the focal point for diplomacy on Burma, we urge the US to support the continuation ofaspecial envoy of the secretary-general. It is crucial that the secretary-general and the special envoy not get sucked into the game of access or high-level meetings being the goal orasign of progress. The envoy must be an individual with the principles, skills, and backing of the international community to make an impact.SanctionsThere is nowastrong and even emotional debate on sanctions against Burma. Some argue that sanctions have not had any discernible impact on the military government and should be lifted. Others argue that for political and technical reasons they have never been properly implemented and, therefore, more pressure should be applied by imposing sanctions on additional companies and individuals, and also by encouraging countries and institutions that have not imposed sanctions to do so.Part of the problem is that this debate tends to treat all sanctions as the same, when in fact they should be differentiated. In our work in various countries around the globe, we have found that properly imposed targeted sanctions can be effective in bringing about improvements in human rights. Targeted sanctions include arms embargoes and restrictions on military assistance, travel bans on individuals, financial sanctions on individuals and entities, and investment and trade sanctions that are specifically focused on companies or economic sectors of greatest concern.Perhaps the most effective of these are financial sanctions, which we urge the United States to expand, strengthen, and fully implement. The United States has authorities it is not yet using - for example, to deny foreign banks access to the US financial system if they are holding targeted Burmese accounts or otherwise undermining US measures, and going after transactions by the oil and gas authority, the key revenue-generating entity in Burma. This requires the dedication of intelligence resources and continual monitoring and adjustment by US officials - another reason why it's important to haveasenior envoy in place.Targeted sanctions don't impose hardship on ordinary people, but do provide leverage if effectively implemented. One approach to make targeted sanctions more effective is for the US to take the lead in coordinating efforts among the US, EU, Switzerland, Australia, and Canada to target key individuals, both military and civilian, who bear responsibility for abuses; their business interests; and the individuals and entities whose considerable financial support of the SPDC could undermine these sanctions. These individuals are at the apex of the system inside Burma and susceptible to this kind of pressure. More effective coordination could also lead to greater support from other key states such as Japan and Singapore. EU states have been noticeably slow to implement full financial sanctions; the US should first setagood example and then press European countries to follow suit. Slow implementation by the US and poor coordination internationally have undermined financial and other sanctions, and kept them from realizing their potential.Human Rights Watch also believes the US should pursue openings for targeted military sanctions through the UN Security Council's agenda on children and armed conflict. The Security Council has stated in two resolutions (SC Res. 1539 and Res. 1612) that it will consider bans on the export and supply of small arms, light weapons, and other military equipment and assistance to parties that refuse to end their recruitment and use of child soldiers. The Burmese military retains thousands of children in its ranks and has been identified repeatedly since 2002 by the UN secretary-general for its continued recruitment and use of child soldiers. While the imposition of sanctions by the Security Council against Burma has proven nearly impossible, the children and armed conflict agenda providesauseful avenue for stronger Security Council action. A credible threat of military sanctions can be used as leverage to gain concrete improvements in ending the widespread recruitment and use of children as soldiers.While we strongly support targeted measures, Human Rights Watch recognizes that generalized sanctions are less likely to be effective and may hurt large numbers of ordinary people, while not having significant impact on governments in targeted countries. In the case of Burma, the existing ban on garment imports has had no discernible impact on the SPDC. We think the US ban on all imports from Burma as it applies to garments should, at the right time, be suspended, lifted, or phased out -- so long as the exporting companies and their contractors meet international labor standards, these companies and associated individuals are not themselves targeted for sanctions because of their close ties to the generals, and the companies in question are not otherwise directly linked to the SPDC or armed forces.However, in light of the sham trial of Aung San Suu Kyi and the lack of political reform, we do not think now is the right time to change these sanctions, as it would send the wrong signal to the SPDC, suggesting that the United States or others have lost their will or commitment to keep up the pressure for democratic reform. Further, it is critical that when the import sanctions as they apply to garments are suspended, lifted, or phased out that this take place only at the same time that new, more effective, targeted sanctions are imposed on key individuals and types of business activity that sustain the regime and existing related sanctions are strengthened.AidOn humanitarian aid, Human Rights Watch has long called for increased assistance to deal with acute humanitarian needs in Burma. US funding should increase. But, again, some cautions. First, the cause of Burma's humanitarian problems is notalack of available resources. Burma has made gas deals with Thailand that provides the government its largest source of revenue, worth approximately $2 billion annually. A new deal to supply natural gas to China via an overland pipeline will significantly add to that sum. Burma's leaders also count on large earnings from sales of gems and timber, and ongoing hydroelectric projects are expected to generate additional lucrative export revenue.Despite these large revenue sources, the military government spends next to nothing on the welfare of its people. The largest share of the state budget is allocated to the military, as much as 40 percent, while combined social spending is estimated to beapaltry 0.8 percent of GDP for 2008/09, making public expenditures on health and education in Burma among the lowest in the world. Huge numbers of Burmese live in grinding poverty, brought upon by decades of government economic mismanagement and corruption. For this reason, the suggestion that Western business investment in Burma would somehow open up the country is fallacious. Foreign investment in Burma is concentrated on the extraction of natural resources and building of hydropower projects. The resulting revenues are largely squandered, stolen, or used for military spending instead of to meet humanitarian and development needs, ,thereby resulting in the strengthening of those in power and robbing the Burmese people of their patrimony.Donor discussions with the SPDC over the provision of humanitarian assistance should not neglect the government's ability to contribute substantially to such assistance. Donors should also remember that the purpose of humanitarian aid is humanitarian - to keep people alive and healthy - not political. No one should expect humanitarian aid itself to haveasignificant political effect in opening up the country or changing the government's policies. Donors will also need to stress the importance of transparency and accountability in the delivery of humanitarian aid, including the need for approaches that strengthen civil society rather than existing corrupt power structures and that respond to the views and needs of ordinary people.The SPDC does not want to be totally dependent on China. For this reason, it also wants assistance from the US, EU, and Japan. Development aid isavery important incentive for change in Burma. However, we do not believe development aid from the US or other countries should be made available until there is significant political reform, progress on human rights, better governance, and the possibility of consulting civil society and local communities in setting development goals. Likewise, World Bank lending for development should also not be resumed until these conditions are met. Unfortunately, the SPDC gives priority to development projects that are "vanity projects" for its leaders, facilitate abusive military campaigns, and help generate funds to strengthen military rule, when what is needed is development that would alleviate the poverty and deprivation of ordinary citizens.Helping the Burmese people is one of the most difficult and intractable problems the world has faced in recent decades. We don't underestimate the challenge, but we thinkarevitalized approach with strong US leadership can makeasignificant difference in the years ahead.Sincerely,Kenneth RothExecutive DirectorUS Should Complete Policy ReviewPrincipled Diplomacy, Aid, and Targeted Sanctions Can Spur Change(New York) - The Obama administration should promptly conclude its Burma policy review and adopt initiatives to make its policies on diplomacy, sanctions and humanitarian aid more effective, Human Rights Watch said inaletter to Secretary of State Hillary Rodham Clinton released today."Delays in announcinganew Burma policy could encourage Burmese military leaders to believe the US is weakening its commitment to human rights and pluralism," said Brad Adams, Asia director at Human Rights Watch. "Although the situation in Burma seems intractable, an energetic and revitalized approach to Burma from the Obama administration could help bring positive change."Human Rights Watch recommended that the United States appoint its own special envoy on Burma, who would haveadirect line to the secretary of state and specific instructions to engage inaprincipled way with the Burmese government and key bilateral and multilateral actors. Vigorous diplomacy is specifically needed with China, India, Thailand, Indonesia, Malaysia, and Japan.Human Rights Watch also recommended the establishment ofaBurma Contact Group or similar form of multilateral grouping to meet and regularly discuss diplomatic engagement with the Burmese government onarange of issues. This could have the effect of converging the views and policies of China, India, Thailand, Indonesia, Japan, the European Union, and the United Nations, and gradually minimize the ability of Burma to play states off against each other. There is considerable common ground onarange of issues, including the need for political reform and credible elections involving the political opposition, concern over Burma's trafficking in heroin and methamphetamines, and the need foraregional approach to the HIV/AIDS epidemic. Suchagrouping would demand that the US remain firm on fundamental human rights principles and not engage in diplomatic horse-trading on core issues of reform.As the UN has long been the focal point for diplomacy on Burma, Human Rights Watch urged the US to support the continuation ofaspecial envoy of the secretary-general. It is crucial that the secretary-general and the special envoy not accept access or high-level meetings as the goal orasign of progress in Burma, as they have in the past. The envoy should be an individual with the principles, skills, and backing of the international community to make an impact."More high-level diplomacy is welcome, so long as the US stands by its principles to uphold the basic rights of the Burmese people and work foragenuine and credible process of political reform," said Adams. "But there should be no wishful thinking or illusions that more conciliatory talk from the US and others will somehow cause Burma's generals to alter their plans."Human Rights Watch said that generalized sanctions on Burma that have had little or no impact and have not been targeted on key decision-makers and human rights abusers should be reconsidered and phased out at an appropriate time. At the same time, properly imposed, targeted sanctions - such as financial sanctions on individuals and entities, investment and trade sanctions that are specifically focused on companies or economic sectors of greatest concern, arms embargoes, restrictions on military assistance, and travel bans on individuals -should be tightened, as they can be effective in bringing about improvements in human rights.Human Rights Watch particularly urged the United States to expand, strengthen, and fully implement financial sanctions. The US should take the lead in coordinating efforts among the US, EU, Switzerland, Australia, and Canada to target key individuals, both military and civilian, who bear responsibility for abuses; their business interests; and the individuals and entities whose considerable financial support of the Burmese government could undermine these sanctions. These individuals are at the apex of the system inside Burma and susceptible to this kind of pressure. More effective coordination could also lead to greater support from other key states, such as Japan and Singapore. EU states have been noticeably slow to implement full financial sanctions; the US should take the lead and then press European countries to follow suit. Slow implementation by the US and poor coordination internationally have undermined financial and other sanctions, and kept them from realizing their potential."The US has legal tools it is not yet using - for example, to deny foreign banks access to the US financial system if they are holding targeted Burmese accounts or otherwise undermining US measures, and going after transactions by the oil and gas authority, the key revenue-generating entity in Burma," said Adams. "This requires the dedication of intelligence resources and continual monitoring and adjustment by US officials."Human Rights Watch has long called for increased assistance to deal with acute humanitarian needs in Burma. US and other donor funding should increase, but inacoordinated and realistic manner. The military government spends next to nothing on the welfare of its people. Combined social spending is estimated to beapaltry 0.8 percent of GDP for 2008-2009, making public expenditures on health and education in Burma among the lowest in the world. Huge numbers of Burmese live in grinding poverty, resulting from decades of government economic mismanagement and corruption. Donors will need to stress the importance of transparency and accountability in the delivery of humanitarian aid, including the need for approaches that strengthen civil society rather than existing corrupt power structures and that respond to the views and needs of ordinary people."The US and other donors offer to provide more humanitarian aid with appropriate oversight, but they should also insist that their contributions are matched byagenuine commitment from the military government to use its vast revenues from natural resources to help the Burmese people," said Adams. Summary only...
တီတီစီ မှာကျောင်းအပ်ဖို့က ကျောင်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာနံပါတ်နဲ့ လုံးဝမဆိုင်ပါဘူး။ကျောင်းကိုဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက် နည်းလမ်း နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။(၁) မည်သည့်အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန လက်အောက်မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းရဲ့ သားသမီးမဆိုကျောင်းဝင်ခွင့်ရနိုင်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်မျိုးစုံမှာ ဆရာဆရာမများရဲ့ သားသမီးအရင်းအချာများနဲ့ပညာရေးတက္ကသိုလ်လက်အောက်ရှိကျောင်းဆရာဆရာမများ၊ ဝန်ထမ်းများရဲ့ သားသမီးများကကျောင်းတက်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးက တက်ရောက်ခွင့်ရကြပါတယ်။(၂) လူကြီးလက်မှတ်ဖြင့်ကျောင်းတက်ခြင်း။လူကြီးလက်မှတ်ဆိုတာက နိုင်ငံတော်အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများရဲ့လက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။လက်မှတ်က ဘယ်လောက်ရာထူးကြီးကြီး ပုံစံမကျရင်မရွေးပါဘူး။ ဒီနှစ်(ဗိုလ်ချုပ်မောင်အေး)ရဲ့လက်မှတ်ပါတာတောင်မှ ပုံစံမမှန်လို့ အေခန်း(VIP) အခန်းကိုတက်ခွင့်မရလို့ ပြဿနာတက်ပါသေးတယ်။ ဒီနှစ်ကစလို့ အခန်းကိုလည်းမဲနှီုက်ပြီးရွေးချယ်ပါတယ်။အေခန်းကလွဲလို့ပေါ့လေ။ အရင်ကတော့ အခန်းကောင်းကောင်းရဖို့က လျှောက်လွှာနံပါတ်နဲ့ အနည်းငယ်ဆိုင်ပါတယ်။ပုံစံအမှန်ဆိုတာက ရာထူးတော်တော်ကြီးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက သူ့ရဲ့မြေး၊သို့မဟုတ် တူ၊တူမတော်စပ်ကြောင်း၊ ဒီအတွက် ကျောင်းဝင်ခွင့်ပြုစေလိုကြောင်းဆိုတဲ့လက်မှတ်ပါ။ပညာရေးတက္ကသိုလ်အသိုင်းအဝိုင်း၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနအသိုင်းအဝိုင်းက ရာထူးကြီးကြီးတွေလည်း အဲလိုထိုးပေးရင် ရပါတယ်။ ပွဲစားနဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းရှိလို့ဘဲ လက်မှတ်ကောင်းကောင်းတစ်ခုရဖို့ အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။အပြင်မှာပိုက်ဆံတွေအရမ်းကုန်တယ်ပြောနေကြတာ ပွဲစားတွေက ကြားခံလုပ်စားနေတာပါ။လက်မှတ်ထိုးပေးတဲ့ လူကြီးတွေတောင် တစ်ဝက်မရပါဘူး။အပြင်မှာ ပိုက်ဆံတွေနင်းကန်တောင်းနေကြပေမယ့် ကျောင်းရဲ့တရားဝင် ဝင်ငွေကတော့ သုညပါ။ အလှုငွေတောင်းခံခြင်းလုံးဝလက်မခံတော့ပါ။ အပြင်ကကျောင်းတွေကတော့ လက်ခံနေကြပေမယ့် တီတီစီကတော့လက်ခံလို့မရသေးပါ။ နှစ်စဉ်ဆယ်တန်းတွေကို ရွှေအစစ်ဆုချနေတဲ့ အစဉ်အလာက သူငယ်တန်းကျောင်းဝင်ခွင့်က ရတဲ့ပိုက်ဆံပါ။ အခုတော့ ဝင်ငွေမရှီတော့လို့ နှစ်စဉ် စပွန်ဆာရှာနေရပါတယ်။ မနှစ်ကတော့ စပွန်ဆာက တီတီစီကျောင်းသားဟောင်း ဦးတေဇပါ။ Summary only...
ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့ ကိုညီညီအောင်နှင့် ဆက်သွယ်ခွင့်ရဖို့ အမေရိကန်သံရုံးကြိုးပမ်း10 September 2009(VOA) ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား နိုင်ငံရေးတက်ကြွသူ အမေရိကန် နိုင်ငံသားတဦးဟာ မကြာသေးခင်က မြန်မာနိုင်ငံကို အသွား အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရလို့ အမေရိကန်သံရုံး တာဝန်ရှိသူတွေက တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့ တောင်းခံထားပါတယ်။ ဖမ်းဆီးချိန်ကစလို့ သူ့မိသားစုတွေကတော့ သူ့အခြေအနေကို တိတိကျကျ မသိနိုင်ဘဲ ဖြစ်နေရလို့ စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်မှုတွေလည်း ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ ဒီအကြောင်း သိထားသမျှ ကိုအောင်လွင်ဦး က တင်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ နေထိုင်သူ မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားသူ တဦးဖြစ်တဲ့ ကိုညီညီအောင် ခေါ် ကိုကျော်ဇောလွင် ဟာ ဒီလ ၃ ရက်နေ့ကပဲ ထိုင်းနိုင်ငံကတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံကိုအသွား ရန်ကုန် မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်မှာပဲ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်း မိသားစုနဲ့ နီးစပ်သူတွေက ပြောကြတာပါ။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ အခုအခါမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံ ကလည်း သိရှိထားပြီး ဖြစ်သလို ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ အမေရိကန် သံရုံးကလည်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းမှုတွေ လုပ်ဆောင်နေပြီလို့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် တဦးဖြစ်တဲ့ အီရန် ကယ်လီ (Ian Kelley) က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်း သတင်းထောက်တွေကို ပြောဆိုခဲ့တာပါ။"ဒီသတင်းကျနော်တို့ ရရချင်းဆိုသလိုပါပဲ၊ ကျနော်တို့ အစိုးရဆီသွားပြီး သတင်းအချက်အလက် ရယူဖို့ တောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းရဲ့ အခွင့်အရေး အကာအကွယ်ပေးတဲ့ ဥပဒေအရ ကျနော်တို့ ဒါတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အသေးစိတ်တော့ ထုတ်ပြောခွင့်မရှိပါဘူး။ ကောင်စစ်ဝင်ရုံး တာဝန်ရှိသူတွေက တွေ့ဆုံခွင့်တွေ ရဖို့လည်း ကျနော်တို့ တောင်းခံထားပါတယ်။"အမေရိကန် နိုင်ငံသားအဖြစ် ခံယူထားသူ ကိုညီညီအောင် ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေကတော့ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ သတင်း ကြားသိချင်းဆိုသလို ဆက်သွယ်စုံစမ်းမှုတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမယ့် အခုအချိန်အထိ အခြေအနေကို ရေရေရာရာ မသိရလို့ စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်နေရတာပါ။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မိသားစုမိတ်ဆွေတဦးဖြစ်တဲ့ ကိုဇော်ဇော် ကတော့ သူ့ကို ဖမ်းသွားချိန်ကစလို့ အကျိုးအကြောင်း မသိရတဲ့ အခြေအနေမို့ စိတ်ပူနေကြတာလို့ ပြောပါတယ်။"ကျနော်တို့သိတာကတော့ ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ သူ့အစ်ကိုကနေတဆင့် ကျနော်တို့ သိတာပေါ့လေ။ သူ ရန်ကုန် လေဆိပ်ရောက်တော့ သူ့ကို ဖမ်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး သိလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် အသေးစိတ် ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ဖမ်းသွားတယ်ဆိုတာတော့ ကျနော်တို့ အသေးစိတ် မသိရသေးဘူး။ အခုလောလောဆယ်က သူ ဘယ်မှာ ရောက်နေမှန်းမသိတော့ ကျနော်တို့အားလုံး သူငယ်ချင်းတွေ အကုန်လုံးက စိတ်ပူတယ်။ ဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှန်းမသိ၊ ဘာမှလည်း သတင်းမကြားတဲ့အခါကြတော့ ကျနော်တို့ အားလုံးကတော့ အဓိက သူ့ရဲ့ လုံခြုံရေးကို စိတ်ပူတယ်ပေါ့။ ဘာများဖြစ်လဲပေါ့။ တခုခု ခေါ်သွားပြီး ပျောက်သွားတာမျိုး အရင်တုန်းကလည်း ရှိခဲ့တာမျိုးရှိတော့ ကျနော်တို့က အတော်လေး စိုးရိမ်ပါတယ်။"အခု အာဏာပိုင်တွေ ဖမ်းဆီးတာ ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ ကိုညီညီအောင် ဟာ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဒီမိုကရေစီရေး တောင်းဆို အုံကြွမှုတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ တဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ သူ့ရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ အသက် ၆၀ အရွယ်ရှိ ဒေါ်စန်းစန်းတင် ဟာ ဆိုရင်လည်း ၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ သံဃာတော်တွေရဲ့ ဦးဆောင်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး ဖမ်းဆီးခံထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုညီညီအောင် ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ် ရည်ရွယ်ချက်ဟာ ဘာလဲဆိုတာ အခုအချိန်မှာ သဲသဲကွဲကွဲ မသိရသေးပေမယ့် မိသားစုနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မှုတွေနဲ့ ဆိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်း မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ ကိုဇော်ဇော် က ပြောပါတယ်။"ညီညီ ရဲ့ အမေ အန်တီ စန်း က ထောင်ထဲမှာပေါ့လေ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရွှေဝါရောင် သံဃာတော်တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ညီညီရဲ့ အမေကို ဖမ်းသွားတယ်။ ညီညီရဲ့ ၀မ်းကွဲ ညီမနှစ်ယောက်ကိုပါ ဖမ်းသွားတာပေါ့။ ညီညီရဲ့ အမေကလည်း ထောင်ထဲမှာ အခြေအနေ ကျန်းမာရေး တော်တော်လေး ဆိုးတယ်။ ကျန်းမာရေး သိပ်မကောင်းဘူး ဆိုတဲ့အခါကျတော့ ညီညီ အနေနဲ့ စိတ်ပူပင်မယ်လို့ ကျနော်တို့ ထင်တယ်။ ဒါကတော့ ကျနော်တို့ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ဟာကို ပြောတာပေါ့လေ။ သူ့ရဲ့ အဓိက သွားရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကျနော်တို့လည်း သေချာအတိအကျ မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာကတော့ သူ့အမေအတွက် စိတ်ပူတယ်။ သူ့မောင်နှမသားချင်းတွေ အတွက် စိတ်ပူပြီးတော့ သူ့အနေနဲ့ တခုခု လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယူဆပြီးတော့သွားတယ်လို့ ကျနော် ထင်တယ်ပေါ့လေ။"အာဏာပိုင်တွေ ဖမ်းဆီးတာခံနေရတဲ့ ကိုညီညီအောင် ခေါ် ကိုကျော်ဇောလွင် ရဲ့ မိသားစု မိတ်ဆွေ တဦးဖြစ်သူ ကိုဇော်ဇော် ပါ။ ဒီလို သူဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆက်လက်ပြီး လိုက်လံကူညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ အတွက်ကိုတော့ မိသားစုနဲ့ မိတ်ဆွေတွေက သူနေထိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်မြေမှာရှိတဲ့ လွှတ်တော် တာဝန်ရှိတွေထံ အကြောင်းကြား အကူအညီ တောင်းခံထားတယ်လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။Any other questions please send e-mail to Ma Wa (wawamaw@gmail. com). We have to stand for our brotherhood ---real and pure 88's blood.keeps on eyes for him. However, we have to support and doing something for him urgently.Any updated news--we send to you again.--please spread to other...When I send this postcard campaign for him everyone could use on web/mail/news letter. (by Ma Wa)
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏မြေး ဖိုးလပြည့်က ရန်ကုန်မြို့တော်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ ကော်ဖီဆိုင် တဆိုင်ကို မှန်များရိုက်ခွဲ ဖျက်ဆီးရန် သူ၏ လုံခြုံရေး တာဝန်ယူသူ ဗိုလ်မှူးအား စေခိုင်းခဲ့ပြီးနောက် အဆိုပါကော်ဖီဆိုင်မှာ ယခု ပိတ်သိမ်းလိုက်ရသည်။ ဆိုင်သည် ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်း၊ ချင်းချောင်းနန်းတော် ရှေ့ရှိ ယဉ်ကျေးမှု ၀န်ကြီးဌာနပိုင် မြေတွင် မကြာမီ လပိုင်းကမှ ငှားရမ်း ဖွင့်လှစ်ထားသည့် Seven Corners ကော်ဖီဆိုင် ဖြစ်သည်။ စားသုံးသူများ ကြိုးမဲ့ အင်တာနက် အသုံးပြုနိုင်သည့် ကော်ဖီဆိုင်လည်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ် ၃ ပတ်ခန့်က ဖိုးလပြည့်က ဆိုင်ရှိ ပစ္စည်းနှင့် မှန်များကို ရိုက်ခွဲရန် စေခိုင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည် ဟု သိရှိရသည်။ ထိုသို့ရိုက်ခွဲစဉ် “နိုင်ငံတော် အတွင်းရေးမှူး တာဝန် ယူထားတဲ့သူတွေရဲ့ သားသမီးတွေက ဒီလို နိုင်ငံတော်ပိုင် မြေပေါ်မှာ စီးပွားရေး လုပ်စားရသလား” ဟုပါ ပြောဆိုရန် မြေးဖြစ်သူက ညွှန်ကြားခဲ့သည်ဟု အရာရှိဟောင်း တဦးက ပြောကြားသည်။ ထိုသို့ ရိုက်ခွဲ ဖျက်ဆီးခိုင်းသည့် ကိစ္စမဖြစ်မီ ရက်ပိုင်းအလိုတွင် အဆိုပါ ဆိုင်သို့ ဖိုးလပြည့် ရောက်ခဲ့ပြီး ကျပ် ၅ထောင်တန် ကော်ဖီ သောက်လိုကြောင်း မှာကြားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ၀န်ထမ်းများက ဆိုင်တွင် ၃ထောင်ကျော်တန် ကော်ဖီသာ ရှိကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ပြီး ထို ဈေးအကြီးဆုံး ကော်ဖီကိုသာ ရောင်းချပေးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ဖိုးလပြည့်က ကျပ် ၅ထောင် ပေးချေပြီး ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ထိုအဖြစ်အပျက် နောက်ပိုင်းတွင် ဆိုင်ကို ဖျက်ဆီးမိန့် ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဆိုင်ရှိမှန်များ ရိုက်ခွဲခံရပြီးနောက်တွင် ဆိုင်ပိတ်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်ကုန်တွင် ဆိုင် အဆောက်အဦးကိုပါ အမြန် ဖျက်သိမ်းလျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဆိုင်ကို နအဖအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ၁ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သီဟသူရ တင်အောင်မြင့်ဦး၏ သား၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း နှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဦးစိုးသာ၏သား တို့ အပါအ၀င် ၅ဦး အစုစပ် ဖွင့်လှစ်ကြခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ အခြား သီးခြား အတည်မပြုနိုင်သည့် သတင်း တရပ် အရ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မြေးဖြစ်သူနှင့် ဆက်နွယ်သည့် ကုမ္ပဏီက ကုန်ပစ္စည်း တင်သွင်းခွင့် ပါမစ် လျှောက်ထားရာတွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သီဟသူရတင်အောင်မြင့်ဦးက ပယ်ချသည့်အတွက် ယခုလို လုပ်ဆောင်ရန် စေ့ဆော်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ယခု အဖြစ်အပျက်သည် မကြာသေးမီ နှစ်များက ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း နေ၀င်း၏ နာမည်ကျော် မြေးဖြစ်သူ ကျော်နေ၀င်းနှင့် အပေါင်းအပါများ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကလပ်များတွင် ရမ်းကားခဲ့သည့် အဖြစ်အပျက်များကို ပြန်လည် သတိရစေပြီး၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မြေးဖြစ်သူက အဆိုပါ ကျော်နေ၀င်းတို့၏ နေရာကို ၀င်ယူသည့် သဘော ဖြစ်နေသည်ဟု ရန်ကုန်မြို့မှ သတင်းထောက် တဦးက ဝေဖန် ပြောဆိုသည်။ နအဖ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၏ သားသမီးများ ပိုင်ဆိုင်သည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ရန်ကုန်မြို့တွင်ပင် များစွာ ရှိနေသည်။ အလားတူပင် ဒုတိယတန်း ခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်သည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၏ သားသမီးများလည်း နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်လျက် ရှိကြသည်ကို စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှ လုပ်ငန်းရှင်များက သိရှိကြသည်။ J Donuts ကော်ဖီဆိုင်ဆိုလျှင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၏ မယားပါသား ဦးထွန်းနိုင်ရွှေ ပိုင်ဆိုင်ပြီး၊ ရန်ကုန်မြို့ စူပါမားကက် နယ်ပယ်တွင် အအောင်မြင်ဆုံး ဖြစ်သည့် စီးတီးမတ် အုပ်စုမှာလည်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၏ သားသမီးများက ရှယ်ယာ အများစုကို ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု အမည်မဖေါ်လိုသည့် အကောက်ခွန် ၀န်ထမ်းဟောင်း တဦးက ပြောဆိုသည်။ အဆိုပါ ၀န်ထမ်းက အခြားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် ပြည်ပမှ ဇိမ်ခံပစ္စည်း၊ အစားအသောက်များ တင်သွင်းရန် ခက်ခဲချိန်တွင် စီးတီးမတ်အတွက် ကုန်ပစ္စည်းများကို စစ်တပ် အမည်ခံထားသည့် ကုန်သေတ္တာများဖြင့် တင်သွင်းခဲ့ပြီး မည်သည့် အကောက်ခွန်၊ ထောက်လှမ်းရေးမှ ဖွင့်ကြည့် စစ်ဆေးရန် မ၀ံ့ရဲကြဟု ဆိုသည်။ မိုးမခဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေမြေးရဲ့၊ စီးပွားရေးလောဘ။ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနဲ့ ဒေါ်မကြိုင်တို့ရဲ့မြေးဖြစ်သူ၊ ဖိုးလပြည့်(ခ)နေရွှေသွေးအောင်ဟာ၊ အဖိုး၊ အဖွား တွေရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု၊ (ယာယီ) ဒါဏ်ခတ်ခံထားရကြောင်း၊ ဖိုးလပြည့်နဲ့နီးစပ်တဲ့၊ သူငယ်ချင်းများထံမှ၊ ကြားသိရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဖိုးလပြည့်ဟာ၊ အဖိုးအဖွားတွေမသိအောင်၊ ဝန်ကြီးဌာနတွေကို၊ ဝင်ထွက်သွားလာ လေ့ရှိပြီး၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေ (၎င်းတို့အဆို၊ မုန့်ဘိုး) ရှာဖွေရာမှာ၊ အထူးကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ကြောင်း၊ ဆက်လက် ပြောကြားကြပါတယ်။အင်းယားလမ်း (ဘွဲ့နှင်းသဘင် ခန်းမဆောင် အနောက်ဖက်)ရှိ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင် မြေနှင့် အဆောက် အဦးကို၊ ပြင်ဆင်မွန်းမံပြီး၊ ဖိုးလပြည့်ကိုယ်ပိုင် Night Club ဖွင့်ရန်၊ လျှို့ဝှက်စီစဉ်ပြင်ဆင်နေစဉ်၊ အင်တာ နက်မှာ၊ သတင်းပေါက်ကြားမှုဖြစ်ခဲ့ရာမှ၊ အဖိုးအဖွားတွေသိရှိသွားပြီး၊ တားမြစ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကို ဒေါသထွက်နေတဲ့၊ ဖိုးလပြည့်က၊ တခြားသူတွေရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို၊ လိုက်လံစုံစမ်းပြီး၊ မပိတ် ပိတ်အောင် နည်းမျိုးစုံသုံး ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း၊ ဆိုင်ဖျက်သိမ်းခံလိုက်ရတဲ့၊ စစ်ဗိုလ် ချုပ်တဦးရဲ့သားတဦးမှ၊ ဖွင့်ဟဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း (အနုပညာဦးစီးဌာနပိုင်မြေနေရာ)ပေါ်မှာ၊ ငွေကြေး အမြောက်အမြား၊ အကုန်အကျခံ တည်ဆောက်ထားတဲ့၊ ခေတ်မှီ စားသောက်ဆိုင်တဆိုင်ကို၊ အထက်အမိန့်အရ၊ ချက်ခြင်းဖျက် သိမ်းလိုက်ရပါတယ်။ “7 Lekker” အမည်နဲ့၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတချို့နဲ့ ဝန်ကြီးတချို့ (စုစုပေါင်း ခုနှစ်ဦး) တို့ရဲ့သားသမီးများ စုပေါင်း ဖွင့်လှစ်ထားပြီး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သီဟသူရ တင်အောင်မြင့်ဦးရဲ့သားမှ ဦးစီး လုပ်ကိုင်ဆောင် ရွက်နေတာပါ။ ပြင်ပ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တချို့လည်း၊ ရှယ်ယာ ပါဝင်ထားကြောင်း၊ သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါဆိုင်မှာ၊ လာရောက်စားသောက်ကြသူ အများစုကတော့၊ စစ်အာဏာရှင် အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့၊ သူတို့နဲ့နီး စပ်တဲ့၊ စီးပွားရေး အသိုင်းအဝိုင်းမှ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဆိုင်ရှေ့မှာရပ်ထားတဲ့၊ ခေတ်ပေါ် အကောင်းစားကား ကြီးတွေဟာ၊ အားလုံးနီးပါးမှန်တွေကို၊ အမဲရောင် Sticker များကပ်ထားကြပါတယ်။ (နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင် တွေထဲကလို၊ မာဖီးယား လူဆိုးဂိုဏ်းဝင်တွေရဲ့ ကားတွေနဲ့တူတယ်လို့၊ ပြောကြပါတယ်။) ထိုင်းနိုင်ငံမှ စားဖိုမှူးကြီးများကို၊ ငှားရမ်း အသုံးပြုထားတာကြောင့်၊ ဈေးကြီးပေး စားသောက်ရတာဖြစ်လို့၊ သာမာန်ပြည်သူတွေ အနားမကပ်နိုင်ပါဘူး။ ပြည်သူတွေဆင်းရဲတော့၊ သံဃာတော်တွေတောင် ဒုက္ခတွေ့နေကြရပါတယ်။သားသမီးတွေရဲ့စီးပွားရေးကို၊ အခုလိုထိခိုက်စေတဲ့၊ အဖြစ်အပျက်တွေကြောင့်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသီဟသူရ တင်အောင်မြင့်ဦးနဲ့၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တချို့ မကြေမနပ်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ တပ်ချုပ်ကြီးအနေနဲ့၊ ဖိုးလပြည့်အလိုကြ၊ တဖက်သတ် ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်နေမှုအပေါ်၊ မကြေနပ်ကြတဲ့၊ အဆိုပါ ဗိုလ်ချုပ်တချို့က၊ တိုးတိုး တိတ်တိတ် ဝေဖန်လျှက်ရှိကြောင်း၊ နေပြည်တော် စစ်တပ်အသိုင်းအဝိုင်းမှ ကြားသိရပါတယ်။သူရဲကောင်းPosted by ကိုထိုက် Summary only...
နိုင်ငံရေးအမှုလိုက် ရှေ့နေကြီး ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ စက်တင်ဘာလ 09 ရက် 2009 ခုနှစ် 17 နာရီ 19 မိနစ်အယူခံဝင်တယ်လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေက ဒါဟာ ရန်သူ့ဆီမှာ အညံ့ခံတာပဲလို့ ထင်မြင်တတ်ကြပါတယ်။ဘာကြောင့် ဒီလိုအယူအဆတွေ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရသလဲဆိုရင် နိုင်ငံရေးပြစ်မှုနဲ့ ဖမ်းဆီး ထားခံခဲ့ရသူတွေကို စစ်ကြောရေးမှာ လနဲ့ချီပြီး (တချို့ နှစ်နဲ့ ချီပါတယ်၊) စစ်ဆေးမေးမြန်းတာ ခံခဲ့ကြရပါတယ်။အဲဒီလိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပမ်းပြီး ရရှိလာတဲ့ စစ်ကြောရေးထွက်ချက် တခုတည်းနဲ့ စစ်ခုံရုံး၊ အထူးခုံရုံးဆိုပြီး အကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာ စစ်ဆေးချင်ယောင်ဆောင်တဲ့ တရားရုံးတွေမှာသာ တရားစီရင်တာ ကြုံခဲ့ရတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလို စစ်ကြောရေးမှာ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီး၊ စစ်မေးထားချက်တွေကို စွဲကိုင်ကာ စစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့ တရားသူကြီးဆိုသူတွေရှေ့မှာ ဝန်ခံခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်သူမှ အဲဒီတရားသူကြီးတွေရှေ့မှာ ဝန်မခံကြပါဘူး။ ဒီတော့မှ အမှုစစ်အရာရှိဆိုသူတွေက ချော့မြှူကာ၊ ဝန်ခံလိုက်ရင် လျှော့ပေးမယ်ဆိုပြီး မြှူဆွယ်စွဲဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ စစ်ကြောရေးမှာတုန်းက ရက်ရက်စက်စက် လုပ်ခဲ့သူတွေဟာ အခုတရားရုံးရှေ့မှာမှ သဘောကောင်းပြနေတာကိုက မရိုးသားမှန်း သိသာနေတဲ့အတွက် ဘယ်သူမှ ဝန်မခံကြပါဘူး။ဒါကြောင့် ဘာမှစစ်ဆေးမေးမြန်းမနေဘဲ အမိန့်ချချင်သလို ချလိုက်ပြီး၊ နောက်တနေ့မှ ထောင်ဝန်ထမ်းတွေတဆင့် အယူခံဝင်မလားလို့ လာမေးခိုင်းတာမျိုးတွေနဲ့သာ ကြုံဆုံဖူးခဲ့ရတာ များပါတယ်။တရားရုံးရှေ့မှာ အမှုတောင် အစအဆုံး တခါမှမစစ်ခဲ့ဘဲနဲ့ အယူခံဝင်မလားလို့ လာပြီး သဘောကောင်းပြနေတာဟာ အညံ့ခံခိုင်းတာ သက်သက်ဖြစ်တယ်လို့ အားလုံးက ယုံကြည်နေခဲ့ကြပါတယ်။ပိုဆိုးတာက လွတ်လပ်တဲ့ရှေ့နေ ငှားရမ်းခုခံခွင့်လည်းမရတော့ မူလအမှုမှာ ဥပဒေနဲ့မညီ ပြုမူထားတာတွေကို ထောက်ပြခုခံမှု မပြုနိုင်ခဲ့တာကြောင့် အယူခံဝင်နေလည်း နိုင်ဖို့ရာ အကြောင်းမရှိနိုင်ဘူးပေါ့။တကယ်တော့ စစ်ကြောရေးတွေမှာ ခြိမ်းခြောက်တာ၊ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာ၊ ဖြားယောင်းတာတွေကြောင့် ထွက်ဆိုခဲ့ရတာတွေဟာ တရားရုံးမှာ သက်သေခံမဖြစ်ပါဘူး။ အဲဒီထွက်ချက်တွေပေါ် အခြေခံပြီး ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာတွေဟာ ဥပဒေနဲ့ လုံးဝမညီကြောင်းကို ခုခံချေပခွင့်လည်း ဘယ်သူမှ မရခဲ့ကြပါဘူး။အမှန်တကယ်ကတော့ အယူခံမှုဆိုတာ ဒုတိယစစ်ဆေးစီရင်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ၊ မူလအမှုကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။အယူခံဆိုတာ အဆင့်နိမ့်တရားရုံး တရုံးရုံးက ချမှတ်ထားတဲ့ အမိန့်တစုံတရာဟာ တရားဥပဒေနဲ့ မညီတဲ့အကြောင်း အဆင့်မြင့်တရားရုံးကို အရေးဆိုလွှာ တင်သွင်းခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပေါ် မာရီယမ်အွန်လိုင်း အဘိဓာန်ဖြစ်တဲ့ Merriam-Webster Dictionary မှာတော့ (a legal proceeding by whichacase is brought beforeahigher court for review of the decision ofalower court.) အောက်အဆင့်နိမ့်ရုံးက ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို အဆင့်မြင့်ရုံးရှေ့မှာ ပြန်လည်ကြားနာသုံးသပ်ပေးဖို့ အမှုခေါ်ထားတဲ့ တရားစီရင်နေတဲ့အဆင့်ကို အယူခံအမှုလို့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။အယူခံမှုမှာ ဥပဒေပြဿနာ (Law issue) အပြင်၊ အကြောင်းခြင်းရာပြဿနာ (Fact issue) တွေကိုပါ ထောက်ပြပြီး အယူခံအကြောင်းပြချက်တွေကို ခိုင်မာအောင် သက်သေပြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။မူလရုံးရဲ့ ကောက်ယူသုံးသပ်ချက်တွေဟာ ဥပဒေအရ မှားယွင်းနေကြောင်းကို အကိုးအကားစုံလင်စွာနဲ့ တင်ပြရမယ့်တာဝန်ဟာ အယူခံတရားလိုမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။အယူခံအမူမှာ အယူခံတင်သွင်းသူက တရားလိုဖြစ်သွားပြီး မူလရုံးတရားလိုက အယူခံတရားခံ ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။အယူခံအခွင့်အရေးဟာ နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုမှာတော့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေက ပြဋ္ဌာန်းပေးထားတဲ့ နိုင်ငံသားတိုင်းရတဲ့ မွေးရာပါအခွင့်အရေး ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း လွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းက အခြေခံဥပဒေနဲ့ အုပ်ချုပ်ခဲ့လို့ အယူခံအခွင့်အရေးဆိုတာ အခြေခံဥပဒေကပေးတဲ့ အခွင့်အရေး ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၁ဝ၁ (ဆ) မှာ အမှုများမှာ ခုခံချေပခွင့်နဲ့ ဥပဒေအရ အယူခံခွင့်ပေးခြင်းဆိုတဲ့ တရားစီရင်ရေးမူ ၈ ချက်ထဲက တချက်အဖြစ် ပါဝင်တယ်ဆိုတာကို တွေ့ရမှာပါ။ဒါပေမဲ့ အခြေခံဥပဒေ မရှိတော့ပါဘူး။ အဲဒီအခြေခံဥပဒေကို အာဏာသိမ်းအစိုးရဖြစ်တဲ့ နဝတ က မလေးမစား ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကို တရားသူကြီးချုပ်က ၁၉၉၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့မှာ သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။လွတ်လပ်စွာ တရားစီရင်ရေးအခြေခံမူ ပေကျင်းကြေညာချက် (Beijing Statement of Principles of the Independence of the Judiciary) ကို ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့မှာ အာရှ၊ ပစိဖိတ်နိုင်ငံ ၃၂ နိုင်ငံလုံး လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲမှာ တရားသူကြီးချုပ် ဦးအောင်တိုး ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလို လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး နောက် ၃ နှစ်ကြာမှ ၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ် တရားစီရင်ရေး ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ခြင်းဟာ ၁၉၇၄ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေ မရှိတော့ပါဘူးလို့ တရားသူကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင် ဝန်ခံလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ၁၉၇၄ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁ဝ၁ မှာပါဝင်တဲ့ တရားစီရင်ရေးမူ ၈ ချက်ကို ၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ် တရားစီရင်ရေးမူ ၇ ချက်ဆိုပြီး ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုတဲ့ တချက်ပဲ ထုတ်ပယ်လိုက်ပြီး ကျန် ၇ ချက်အတိုင်း ပြန်လည်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်ရတာက ရှိပြီးသားဆိုရင် ထပ်မံပြဋ္ဌာန်းစရာ မလိုပါဘူးပေါ့။အဲဒီအခြေခံဥပဒေ အသက်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ ဥပဒေရေးရာ ပြဿနာနဲ့ အောက်ရုံး ခရိုင်တရားသူကြီးတွေရဲ့ အမိန့်ဟာ မှားယွင်းကြောင်း သက်သေပြရန်တာဝန် (Burden of proof) အရ သက်သေပြရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းခြင်းရာ ပြဿနာမှာလည်း ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ ညအိပ်ခွင့်တောင်းခဲ့သူ မစ္စတာဂျွန်ဝီလျံယက်တောဟာ မေလ ၅ ရက်နေ့ည ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်က ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ် ဆိုပေမယ့်၊ မေလ ၆ ရက်နေ့ မနက် ၅ နာရီ ၃ဝ မှာမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်နဲ့ အရမ်းကိုဝေးတဲ့ ယခု အိုင်ဘီစီခေါ် (International Business Centre) ဘေး၊ ယခင် ကန်သာယာဆေးရုံရှေ့မှာ ၅ လီတာဝင် ရေသန့်ဘူး ၂ လုံးကိုပိုက်ပြီး ရေကူးနေတာကို ရဲဒုတပ်ကြပ်မျိုးလွင်က တွေ့ပြီး ကုန်းပေါ်ဆွဲတင်ခဲ့တယ်လို့ တရားလိုပြသက်သေ ရဲအုပ်သန်းနိုင်က ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။အမှုအတွင်း အောက်ရုံးတရားသူကြီးတွေက မစ္စတာယက်တောကို အခင်းဖြစ်နေရာကို လိုက်လံပြသခိုင်းတုန်းက အဲဒီလို ၆ နာရီနီးပါးကြာအောင် ရေကူးခဲ့တာ ဟုတ်၊ မဟုတ် စမ်းသပ်ရေကူးခိုင်းခဲ့ခြင်းမျိုး မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အင်းယားကန်ဆိုတာ ရေမှော်ဒိုက်တွေထူပိန်းနေတဲ့ ရေသေရေကန်တခုဖြစ်တာကြောင့် အဲဒီကန်ထဲမှာ ရေသန့်ဘူးပိုက်ပြီး ရေကူးမယ်ဆိုရင် ခွေးကူးသာကူးလို့ရမှာ ဖြစ်တယ်။ တကယ်လို့ ခွေးကူးသာကူးခဲ့ပါက ခြေထောက် ၂ ချောင်းမှာ ရေမှော်ဒိုက်တွေနဲ့ ငြိပြီး အလောင်းပါ ၃ ရက်လောက်ပျောက်နေတတ်တဲ့ ကန်ကြီးတခုပါ။ဒါကြောင့် ရေကူးဝင်တယ်ဆိုတာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘဲ လမ်းလျှောက်ဝင်ခဲ့တယ်လို့ အငြင်းပွားစရာ ပြဿနာ ပေါ်ပေါက်နေပါတယ်။ လမ်းလျှောက်ဝင်ခဲ့တယ်ဆိုပါက လုံခြုံရေးတာဝန်ကျ ရဲဝန်ထမ်း၊ ထောက်လှမ်းရေး ဝန်ထမ်းတွေမှာသာ တာဝန်ရှိရမှာ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းခြင်းရာ ပြဿနာတွေကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် တင်ပြခွင့်ဟာ အယူခံမှုမှာမှ တရားဝင် ပြောကြားခွင့် ရတာပါ။အဆင့်ဆင့် အယူခံလျှောက်လွှာ တင်သွင်းနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးက အခု တိုင်းတရားရုံးအပြင် အောက်မြန်မာပြည် တရားရုံးချုပ် (ရန်ကုန်)နဲ့ တရားရုံးချုပ် (နေပြည်တော်)ထိ နောက်ထပ် အယူခံရုံး ၂ ရုံး ကျန်နေသေးပါတယ်။ကမ္ဘာက စောင့်ကြည့်နေတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့ အမှုဖြစ်တာကတကြောင်း၊ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးအောင် စစ်ချင်တဲ့ စီမံချက်ဆိုတာတွေကြောင့်တကြောင်းမို့သာ ဒီလိုတရားရုံးချုပ်တက်လိုက်၊ အယူခံဝင်လိုက်ဆိုတာ ၄လ ကျော်အတွင်းမှာ ပြီးစီးသွားနိုင်တာပါ။ သာမန်အမှုတွေမှာဆိုရင် မြို့နယ်ရုံးကနေ ခရိုင်တရားရုံးလောက် ရောက်ဖို့တောင် အနည်းဆုံး တနှစ်ကျော်ကြာမယ့် အမှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ် ကိုလိုနီခေတ်က မြန်မာတွေ အမွေမှု (တရားမ) တွေ ဖြစ်ကြပြီဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ အမြင့်ဆုံးတရားရုံးတွေအထိ ကုန်အောင် အယူခံမှုတွေတင်တဲ့အပြင်၊ အင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့ ပရီဗွီကောင်စီအထိပါ အယူခံဝင်လေ့ ရှိကြပါတယ်။အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမှုကိုလည်း မိုးအဆုံး၊ မြေအဆုံး လိုက်ကြရမယ်။ တရားစီရင်ရေးစနစ်ကြီးက မမျှတဘူး၊ မကောင်းဘူးလို့ ပြောချင်ရင်၊ အဲဒီတရားစီရင်ရေး အဆင့်ဆင့်ကို အားလုံးဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီးကာမှ တရားစီရင်ရေးစနစ်ကြီးတခုလုံး မကောင်းဘူးလို့ ပြောနိုင်အောင် အားထုတ်ကြရပါမယ်။ ဒါမှ ကမ္ဘာက နအဖ စစ်အစိုးရ လက်အောက်က မြန်မာ့တရားရေးစနစ်ကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်တွေ့လာကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံး အောက်ရုံးတရားသူကြီးတွေရဲ့ ပညာမပြည့်ဝမှုကြောင့် လက်လွန်ခြေလွန် ဖြစ်သွားရပါတယ်ဆိုခဲ့ရင်၊ အထက်တရားရုံးတော်တွေကလည်း ဘယ်လိုဘယ်ပုံရှိမလဲ။ အယူခံဝင်ပြီး စောင့်ကြည့်ကြပါစို့။ ။ Summary only...
ဖိုင်ရယူရန်9 September News အိမ်မီးရှို့ခံရသော ရှမ်းရွာသားများကို အိမ်ပြန်ဆောက်ခွင့်ပြု (ရုပ်သံသတင်း)မဇ္ဈိမသတင်းဌာန ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ စက်တင်ဘာလ 09 ရက် 2009 ခုနှစ် 19 နာရီ 33 မိနစ်ကချင်ရုပ်ရှင် ရန်ကုန်မှာ ရုံတင်ပြီ (ရုပ်သံသတင်း)မဇ္ဈိမသတင်းဌာန ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ စက်တင်ဘာလ 09 ရက် 2009 ခုနှစ် 17 နာရီ 46 မိနစ် Summary only...
ဦးအောင်ခင်၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၉မြန်မာပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီစနစ်တည်ဆောက်ချင်တဲ့ အရပ်သားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ စစ်အစိုးရတို့ စေ့စပ်ဆွေးနွေးတဲ့အဆင့်ကို မရောက်နိုင်သေးဘဲ လိပ်ခဲတည်းလည်းဖြစ်နေရတဲ့ အခြေခံအကြောင်းတခုက အရပ်သားရဲ့ သမိုင်းအမြင်နဲ့ စစ်သားရဲ့ သမိုင်းအမြင် ကွဲပြားခြားနားနေလို့ပါပဲ။ စစ်တပ်တိုင်းမှာ သီးခြားအသွင်လက္ခဏာရှိတယ်။ အရပ်သားနဲ့စစ်သားဟာ သမိုင်းအမြင်ချင်း မတူတာများပါတယ်။ စစ်ဗိုလ်ရဲ့ အတွေးအခေါ်ဟာ စစ်တပ်ရဲ့သမိုင်းအမြင်က လွှမ်းမိုးလေ့ရှိတယ်။အရပ်သားဟာ သူတွေ့ရှိတဲ့ အချက်အလက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီး သမိုင်းရေးတယ်။ မိမိတွေ့ရှိတဲ့ အချက်အလက်ကိုလိုက်ပြီး သုံးသပ်မှုနဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖော်မှုလည်း ပြောင်းသွားရပါတယ်။ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို ရေးလို့မရဘူး။ ကိုယ်ထင်တာကိုမရေးဘဲ တွေ့တဲ့အတိုင်းရေးတာကို သတ္တိရှိတယ်လို့ ပြောတာပါပဲ။ ဗမာစစ်တပ်က သမိုင်းရေးသလို လိုချင်တာတွေထည့်ပြီး မလိုချင်တာ ကို ဖယ်ထုတ်လို့မရပါဘူး။ လူသတ်တာကို ကယ်တင်တာလို့ ရေးလို့မရပါဘူး။ အနောက်တိုင်းမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ စစ်သမိုင်းဆရာတွေဟာ အရပ်သားတွေပါ။ ဗမာပြည်မှာတော့ စစ်ဗိုလ်ကသာ စစ်သမိုင်းကို ရေးခွင့်ရှိသလို ဖြစ်နေတယ်။စစ်တပ်ကိုအယုံတင်သွင်းရာမှာ သမိုင်းကို ၀ါဒဖြန့်ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုပြီး ပုံကြီးချဲ့လေ့ရှိတယ်။ ဒီလိုပြောပါများလာတော့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင် ဂျပိုးကိုလိပ်လို့ ယုံကြည်လာတာပါပဲ။ ဒါကို စိတ်ပညာမှာ auto-suggestion လို့ခေါ်တယ်။ ၂၀ ရာစုအစောပိုင်းမှာ ပြင်သစ်စိတ်ပညာရှင်တဦး Emile Coue 1857-1926 တွေ့တဲ့နည်းပါ။ မိမိကိုယ်မိမိ ကယ်တင်ရှင်လို့ အနှစ် (၅၀) နီးပါး ၀ါဒဖြန့်လာတဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ သူတို့ဝါဒဖြန့်တာကို သူတို့ကိုယ်တိုင် ပြန်ယုံနေတဲ့အတွက် နေရာတကာ စစ်ဗိုလ်က ဦးဆောင်ခွင့်ရှိကြောင်း ဥပဒေပြုတာဖြစ်တယ်။ဥပမာ အမေရိကန်နဲ့ အင်္ဂလိပ် စစ်အင်အားကြီးမားလို့ ဂျပန်စစ်ရှုံးရတာ တကမ္ဘာလုံး သိတယ်။ ဂျပန့်လက်အောက်ခံ ဗမာစစ်တပ်က ဂျပန်ကိုတော်လှန်ပြီး အင်္ဂလိပ်နဲ့ အမေရိကန်ဘက်က ကူတိုက်ပေးတယ်။ ဗမာစစ်တပ် မကူလည်း အင်္ဂလိပ်/အမေရိကန်က နိုင်မှာပါပဲ။ ဗမာစစ်တပ်က တော်လှန်လို့ ဂျပန်စစ်ရှုံးတာမဟုတ်ဘူး။ ဂျပန်ကို တော်လှန်တဲ့အတွက် ဗမာစစ်တပ်သာ အမြတ်ထွက်သွားတယ်။ ဂျပန်နဲ့လက်တွဲပြီး အင်္ဂလိပ်၊ အမေရိကန်တပ်ကို သွားတိုက်မယ်ဆိုရင် ဗမာစစ်တပ်ဟာ အိန္ဒိယလွတ်လပ်ရေးတပ်ဖွဲ့လို အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ရဲ့ ကူလီဘ၀ကို ရောက်သွားမှာ သေချာတယ်။ဒီအဖြစ်အမှန်ကိုမထုတ်ဖော်ဘဲ တပ်မတော်ကတော်လှန်လို့သာ ဂျပန်စစ်ရှုံးသလိုလို တပြည်လုံးကို ၀ါဒဖြန့်ထားတာ စစ်တပ်ရဲ့ သမိုင်းအမြင်ပါပဲ။ ဗမာစစ်တပ်တိုက်ယူလို့ လွတ်လပ်ရေးရတာလို့ စစ်ဗိုလ်တွေယူဆထားတာဟာ မှားယွင်းတဲ့သမိုင်းအမြင်ပါ။ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုသမိုင်းမှာ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးဟာ အခန်းကဏ္ဍလေးတခုသာဖြစ်တယ်။ စစ်ပြီးခေတ် လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဟာ နှလုံးရည်တိုက်ပွဲသာဖြစ်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဗမာစစ်တပ်ဟာ အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ရဲ့ လက်အောက်ခံ ဖြစ်နေလို့ လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာ တိုက်ရိုက်မပါဝင်နိုင်ခဲ့ဘူး။ခေတ်ပညာတတ် စစ်ဗိုလ်ဆရာဝန် စာရေးဆရာ ဒေါက်တာမောင်မောင်ညို လိုဟာမျိုးကတောင် ဂျပန်တော်လှန်ရေးကို အကြီးအကျယ် အောက်မေ့နေတယ်။ ၁၉၇၃ ခုနှစ်က တိုကျိုမှာ ကျနော် သမိုင်းသုတေသနလုပ်နေတုန်း ဒေါက်တာမောင်မောင်ညိုနဲ့ ခဏဆုံမိတော့ ဂျပန်တော်လှန်ရေးအကြောင်း ဘာတွေရေးထားသလဲလို့ သူကမေးတယ်။ ဂျပန်တော်လှန်ရေးကို အလေးအနက်ထားသူ သိပ်မရှိကြောင်း ပြောပြတော့ ဒေါက်တာမောင်မောင်ညို အတော်မကျေမနပ် ဖြစ်သွားတယ်။ ဂျပန်တော်လှန်ရေးကို မှေးမှိန်သေးသိမ်အောင် ကျနော်က တမင်ပြောတဲ့ပုံစံနဲ့ သူ့ခရီးသွားမှတ်တမ်းမှာ ၁၉၇၇ က ရေးထားတယ်။ စစ်ဗိုလ်ဆရာဝန် ဒေါက်တာမောင်မောင်ညိုလည်း စစ်တပ်ဝါဒဖြန့်တာကို ယုံကြည်သူပါပဲ။အခုတော့ ဂျပန်ကို ဗမာစစ်တပ်က တွန်းလှန်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ချက်ကို အများယုံကြည်လာအောင် ပုံကြီးချဲ့ဝါဒဖြန့်ပြီး နိုင်ငံရေးအာဏာကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားတယ်။ ဂျပန်ကို တိုက်ထုတ်သူဟာ ဗမာစစ်တပ်ဖြစ်ကြောင်း ပုံကြီးချဲ့တာကိုနားထောင်ပြီး လူငယ်တွေ ကြီးပြင်းလာရတယ်။ ဗမာစစ်တပ်ရဲ့ ပုံကြီးချဲ့ဇာတ်လမ်းအရ အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်၊ အမေရိကန်စစ်တပ်၊ တရုတ်၊ ကရင်၊ ကချင်၊ ချင်း၊ နာဂနဲ့ မြန်မာအရပ်သားတွေကတော့ ဂျပန်တော်လှန်ရေးမှာ မပါသလို ဖြစ်နေတယ်။တကယ်တော့ ဂျပန်တော်လှန်ရေးကို ပထမဆုံး စတင်ဆင်နွှဲသူဟာ ကရင်နဲ့ ချင်းအမျိုးသားတွေပါ။ ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ အတူ ပထမဆုံးသော ဂျပန်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲ ဦးဆောင်ဆင်နွှဲခဲ့သူ ဗြိတိသျှဗိုလ်မှူး Hugh Paul Seagrim ဖြစ်တယ်။ ကရင်ပြောက်ကျားအဖွဲ့က ဂျပန်စစ်တပ်ကို ပထမဆုံးတော်လှန်တာဖြစ်တယ်။၁၉၄၂ ခုနှစ် ဆောင်းဦးရာသီမှာ ကလေးမြို့ကို ဂျပန်သိမ်းပိုက်ထားတုန်း ကင်းလှည့်တဲ့ ဂျပန်စစ်သားကို ဇိုပြည်သူ့စစ်က ဖြောင်ပစ်တဲ့အတွက် အဲဒီအချိန်ကတည်းက ချင်းတော်လှန်ရေးစတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကလေးမြို့အနီးမှာ ဂျပန်တပ်ဖွဲ့တဖွဲ့ အနားယူနေစဉ် ၁၉၄၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ (၂၃) ရက်နေ့မှာ ဇိုပြည်သူ့စစ်က လျှပ်တပြက်ဝင်တိုက်လို့ ဂျပန် (၁၂) ဦး ကျသွားတယ်။ ဒီတိုက်ပွဲသတင်းကို ဒီဇင်ဘာ (၂၆) ရက်နေ့မှာ ဘီဘီစီအင်္ဂလိပ်ပိုင်းက ကြေညာတယ်။ ဒါဟာ အရပ်သားရေးတဲ့ သမိုင်းပါ။ စစ်တပ်ကို ကယ်တင်ရှင်လို့ ပြည်သူလူထုက မယူဆပါဘူး။စစ်ခေါင်းဆောင်ကို သစ္စာရှိတဲ့စစ်တပ်ဟာ အဲဒီစစ်ခေါင်းဆောင်အလွဲသုံးစားလုပ်တာကို ခံရတယ်။ ဗိုလ်နေ၀င်းနဲ့ ဗိုလ်သန်းရွှေဟာ သာဓကတွေပဲ။ ဒီကနေ့ စစ်ဗိုလ်တွေလက်ခံတဲ့ နိုင်ငံရေးအယူအဆကို နောက်တနေ့မှာ စစ်ဗိုလ်တွေ မေ့သွားနိုင်တယ်။ ၁၉၆၂ ကစပြီး ဗမာစစ်တပ်တခုလုံးက ယုံကြည်ပါတယ်လို့ ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒကို ၁၉၈၈ ရောက်တော့ ယုံကြည်တဲ့စစ်ဗိုလ် တယောက်မှမရှိတော့ဘူး။ ဒါဟာ ဗမာစစ်ဗိုလ်တွေရဲ့ ခံယူချက်လား။အပြင်လူက မြန်မာပြည်ကို နားလည်ဖို့လိုအပ်သလို မြန်မာတွေကလည်း မိမိကိုယ်မိမိ အကဲဖြတ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်း အမေရိကန်သမိုင်းဆရာကြီး ဂွန်ကေဒီ ၁၉၅၇ ခုနှစ်က ပြောဖူးတယ်။ ဗမာစစ်အစိုးရက အနှစ် (၅၀) နီးပါး ကိုယ်ရည်သွေး ၀ါဒဖြန့်ခဲ့တာကြောင့် မြန်မာ့သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်ကို သိနိုင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ အဖြစ်မှန်ကိုမသိရင် တဘက်နဲ့တဘက် နားလည်ဖို့နဲ့ ပြဿဖြေရှင်းဖို့ ခက်ခဲနိုင်တယ်။ဥပမာ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ဟာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကို စိတ်ဝမ်းကွဲပြားအောင်လုပ်ပြီး မြန်မာပြည်ကို သွေးစုပ်ခြယ်လှယ် တယ်ဆိုတာနဲ့ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲလို့ လွတ်လပ်ရေးရတာဆိုတဲ့ ၀ါဒဖြန့်ချက်တွေကို ယုံကြည်လေလေ တိုင်းရင်းသားပြဿနာ ဖြေရှင်းရတာ ခက်လေလေပါပဲ။ မြန်မာ့ပြဿနာဟာ တိုင်းရင်းသားအရေးမှာ အခြေခံတယ်လို့ဆိုတယ်။ ဗမာလူမျိုး ရောက်မလာမီကတည်းက မြန်မာပြည်မှာ တိုင်းရင်းသားအမျိုးမျိုးရှိနေတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေဟာ ဗမာမင်းကို သစ္စာခံလိုက်၊ တရုတ်လက်အောက်ရောက်သွားလိုက်၊ ထိုင်းကိုသစ္စာခံလိုက်နဲ့ နောက်ဆုံး အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ရောက်တော့မှ သူတို့ဘ၀ဟာ လုံခြုံသွားတဲ့သဘောပါပဲ။ ရှေးကတည်းက ဗမာမင်းနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ အကွဲကွဲအပြဲပြဲဖြစ်လာတာကို အင်္ဂလိပ်က လိုသလို အသုံးချသွားတာပါပဲ။ဖက်ဆစ်ဂျပန်စစ်ဗိုလ်ကလည်း သူ့ကိုယ်သူကိုယ် ကယ်တင်ရှင်လို့ ယူဆတာပဲ၊ ၁၉၄၅ မှာ ဂျပန်လက်နက်ချပြီး စစ်တပ်တခုလုံး ဖျက်သိမ်းလိုက်တော့မှ ကယ်တင်ရှင်ဝါဒ နိဂုံးချုပ်သွားတယ်။ စစ်ပြီးခေတ်ဂျပန်မှာ နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာ စစ်တပ်မရှိဘူး။ အမေရိကန်စစ်တပ်နဲ့ ဂျပန်အရပ်သားအစိုးရက ပူးတွဲအုပ်ချုပ်ပါတယ်။ စစ်ဗိုလ်တွေကြောင့် တိုင်းပြည်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အဖြေစ်ကို နာကြည်းခဲ့တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ စစ်မှုထမ်းအလုပ်ကို ဂုဏ်ယူစရာလို့ မယူဆကြတော့ဘူး။ စစ်ရှုံးလို့ရရှိလိုက်တဲ့ အကျိုးအမြတ်ကတော့ ဂျပန်ပြည်မှာ စစ်ဝါဒကွယ်ပျောက်ပြီး ဒီမိုကရေစီစနစ် ထွန်းကားလာတာပါပဲ။ Summary only...